DEGDEG: Baarlamaanka Federaalka oo Cod yaab leh ku ansixiyey Miisaaniyadda dowladda ee 2019 - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. DEGDEG: Baarlamaanka Federaalka oo Cod yaab leh ku ansixiyey Miisaaniyadda dowladda ee 2019 - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Kulankii aan caadiga ahayn ee xildhibannada Baarlamaanka ayaa goor dhoweyd lagu ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019.
Waxaa golaha ka hadlay Guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda xildhibaan Maxamuud C/llaahi Siraaji oo sheegay inay soo dhammeystireen Miisaaniyadda 2019-ka, ayna ka shaqeynayeen maalin iyo habeen, si ay u saxaan, wuxuuna codsadayn inay xildhibannada u codeeyaan.
Waxaa cod loo qaaday Miisaaniyadda 2019-ka, waxaana codkii noqday mid wada ogol ah, iyadoo 174 Xildhibaan oo kulanka Golaha Shacabka ee maanta joogtay ay dhammaantood gacanta u taageen. Ma jirin cid diiday ama ka aamustay.
Previous articleDEGDEG: Xildhibaannada Baarlamaanka oo ansixiyey Hindise Sharciyeedkii labaad & Buuq ka dhashay
Next articleXOG: Xasan Sheekh & C/qaadir Cosoble oo Ololihii Mucaaradnimada dowladda u yeelay weji kale [Akhriso]